Key Strategies maka Email Marketing | Martech Zone
Email marketing na-aga n'ihu ịbụ ụzọ kachasị sie ike iji jikọta, jigide ma dọta ndị ahịa. Mgbe enwere ihe ịma aka ịbanye na igbe mbata, e nwere ndị ka azum na-arụpụta ihe n'ihi na ukwuu na-arụpụta email ahịa otu.
The 2014 Adestra / Econsultancy Email Marketing Industry Census nyochara ndị na-ere ahịa dijitalụ 1,100 ma chọpụta nke àgwà ndị dị oke egwu maka ịmepụta ahịa email otu nro.
Enwere ụfọdụ nnukwu stats iji kwado gị email azum azum kwa infographic ahụ:
83% nke ụlọ ọrụ ọnụego email dị ka ezigbo ma ọ bụ magburu onwe ya maka ịlaghachi na ntinye ego.
63% nke ndị ahịa were ihe karịrị awa abụọ na imewe na ọdịnaya mana naanị 17% were ọ dịkarịa ala awa abụọ na njikarịcha.
49% nke ndị ahịa chee na mmejuputa ngwa ahia ha adighi aga nke oma.
47% nke ndị ahịa ebuli email maka mkpanaka ma 61% nwere isi or adịghị adị atụmatụ ekwentị.
Tags: emailakpaaka emailkpaliri omume kacha mmanjikarịcha emailemail njikarịchaozi emailemail otuemail mkpanakaemail ahia ahiaahịa efu
Email ka bụ ngwa ahịa ahịa dị ike maka ekwentị mkpanaaka. Site na uto ngwa ngwa nke ama ama na Eshia na ụwa ndị ọzọ, na ndị ahịa nwere ohere ọla edo. Ọ bụ nke anyị enweghị ike ileghara anya.